Iyo iPhone 7 inokurumidza kupfuura chero Apple MacBook Air | IPhone nhau
Musi waSeptember 7, chiitiko cheApple kudonha kwakaitika, setsika, mune iyo Cupertino-based kambani inopa nhau dzayo uye zvigadzirwa zvitsva munzanga. Pane ino nguva, kwaive kuchinjika kweiyo yakamirirwa-refu iPhone 7, kuwedzera kune iyo nyowani Apple Watch 2. Zvisinei, nhau nezve iyo nyowani Apple foni yakanga isina kuganhurirwa kune mharidzo, kubvira nguva pfupi yadarika, John Gruber akamira mukati Anotya Fireball kuita kwakanakisa kweiyo A10 Fusion chip iyo inosanganisirwa muiyo nyowani iPhone 7. Mhedzisiro yekuongorora kwayo, sekusvika kune avo vanokwikwidza navo, yakanyanya kunaka.
Zvinoenderana nemhedzisiro yekuenzanisa kwayo, kuongorora maitiro kune ese maviri macores uye asina kuroora cores, zvinoita sekunge iyo iPhone 7 iri pachena inorova makwikwi ayo, kunyangwe zvitsva zveSamsung zvishandiso: iyo Galaxy S7 uye Cherechedzo 7, ese ari maviri neApple, sezvazviri zvakajairwa. . Kunyanya kunakidza kungave kuri kwekuti kumhanyisa kumhanya kweiyo iPhone 10's A7 Fusion chip inoburitsa mhedzisiro zvirinani kupfuura kunyange Apple's MacBook Air yakambokwanisa kuwana. Chete 2015 MacBook Air, iine Intel Core i7 chip, mamakisi 5650, makumi maviri poindi pamusoro pe20 yeiyo iPhone 5630, asi mashandiro e laptop yacho haakwanise kusvika mamakisi efoni e7. kubva kuMacBook kusvika ku2989 kubva ku iPhone 3261. Iyo foni mashandiro akafanana muzvikoro kune izvo zvinowana iyo 7 MacBook Pro, iyo yakavakwa neIntel Core i2013.
Apple yakaisa mari zvakanyanya muayo AX akateedzana processor. Zvakawanda zvekuti zvinotova nerunyerekupe kuti makomputa eiyo brand yeAmerica anogona mune ramangwana kutsiva ma processor eIntel neaya, eApple chairo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Iyo iPhone 7 inokurumidza kupfuura chero Apple MacBook Air
Enzanisa iyo iphone processor neiyo android, mune dzidziso, inogona kunge ichizoshanda, kuchengetedza madaro (ndiko kuti, kushandisa iyo imwechete kodhi inoedza zvakafanana mune ese ma processor)
Asi enzanisa nayo neIntel, ivo vari mumaligi akasiyana emitambo yakasiyana pamapuraneti akasiyana.
Kugona kuenzanisa mhedzisiro ye geekbench iwe unofanirwa kuienzanisa neiyo AMD, nekuti ese ari x86-x64 processor. iyo A10 ruoko, inoshanda zvakasiyana. Iwe haugone kusanganisa mbatatisi uye masoseji kunyangwe iwe uchikwanisa kudya zvese zviri zviviri, handizive kana ndikazvitsanangura ...
Izvo zvisina maturo kuenzanisa maviri akasiyana akasiyana maumbirwo. Handizive ndiani anotendera kuti zvinhu izvi zvibuditswe.
Pindura kuna Setcom
Iyo processor ine aya maitiro uye inoshandisa iyo chete kufambisa ios, iko kutambisa asi isu tinoziva kuti mafeni anongoona nhamba, kwete izvo chaizvo, izvo zvakanaka, foni inofanirwa kuve yakanaka, asi hazviitike kuve uye kushandiswa se runhare.
Iyo App Store neTunes zviri kusangana nekukanganisa